Yaadaa fi Yaaddoo Waa’ee WBO Ilaalu -
Yaadaa fi Yaaddoo Waa’ee WBO Ilaalu:
Damee Boruutin: Amajjii 2/2019
Waan hundaa duraa araara buusuuf Abbootiin Gadaa fi Haatii Siiqqee yaalliin gochaa jiran dadhabii eebisaa akka tahe hubatamuu qaba. Warri aadaa fi duudha Oromoof dhaabbannuu fi kabjinu dadhabinni isaani kun akka milkiin xumurramuu gargaaruu fi utubamuun dirqama keenya. Akka milkaa’uu gochuuf immoo sirni Gadaa ilaa fi ilaamee waan qabuuf yaadaa fi yaaddoo keenya yaroon yoo dhiyeessine aaraara kanaaa fi hegeree Uummata Oromoo ni gargaara fakkaatee natti mul’ata. Kanaafuu, yaadaa fi yaadoo kan tahe wal duraa booda ibsachuu fedha. Haala dogongora natti fakkaatee argamee kaasuun dirqama koo ti.
Mootummaan amma jiru kun Mootummaa Oromoo jedhamee karaa ayyaana ilaalatootaa waan baayyee afarsameef warri dhugeefatan jiru. Gaafa Haayile Mariyam Dasalenyi Mumicha Ministeera ture Mootummaa Walaayitaa hin jedhamne. Har’a maalitu haaraa tahe? Mootummaan kun akkuma wagga 28 darbanii Motummaa EPRDF akka tahe dagachuu hin qabnu. Nama Oromoo himatutu achi jira malee mootummaan kan Oromoo miti.
Humni RIB kan Malasaa Zeenawwii ijaara har’aa illeen Jeneraalota TPLFiin kan dursamu waraana EPRDF. Waraanni kun bara 1992 WBO malaamaltumman kaampitti naqee itti marsee lafa irraa dugugee fixe dha. Bara sana waan hidhanaa of harkaa qabanii WBO keessa namoonni of irratti lolanii lubbuu baafatan jiru. Waraanni kun bara dheeraa kana Uummata Oromoo ajjeessaa fi goola amma har’aa gahe. Waggaa shanan darban Qaree fi Qeerroo dhiiga dhangalaasaa fi shorkokeesaa kan ture waraanuma EPRDF kana. Har’as dhiiga ilmaan Oromoo dhuguuf dheebotee akka foolachaa jiru ni aggara. Waraana kan Oromooti jedhanii waamuun dogongora keessa deebi hin qabne. Haalli kun lamaan Uummata Oromoof ifa tahuu barbaachisaa dha.
Haayuu Dureen ABO, Dawud Ibsaa rakkina kana hiikuuf akka aadaa if duudha Oromooti WBO Abbootii Gadaa fi Uummata Oromoo dabrsee kenuun qajeelaa natti fakkaata. Akka maqaa Koree teekinikaan ibsi gaafa 1/23/19 bahee yoo tahe WBOn guyyaa 20 keessatti galuu qaba jedha. Anaaf murtiin kun dogongaraa guddaa of keessa dha. Haayuu Dureen Abbootii Gadaa duwwaaf hin kenine. WBOn qabeenya dhuunfaa Uummata Oromoo ti. Uummatni Oromoo jiraachuu fi dhabamu WBO irratti yaada kennachuu qaba. Abbootiin Gadaa fi haati Siiqee Uummata Oromoo ol waan jiran natti fakkaatu. Yoom iyyuu olaantummaa kan qabu uummata bal’aa Oromoo natti fakkaata. Uuummatni Oromoo bal’aan maal jedha? keessattu bakka WBOn sochaa jirutti Uummatni Oromoo fi WBOn mariihatamee wal hubannaan jiraachuun barbaachisaa dha.
WBOn akkuma qodaa cabee bakka tokko fuudhanii bakka biraa kan kaa’amu miti. Akeekaa fi Kaayyoo itti manaa baheef qaba. Waan isa baasuu fi hin baafne adda baasee ni hubata. Araara kana keessatti qooda guddaa kan qabu WBO tahee utuu jiruu yaada WBOn qabu, gaaffii WBOn dhiyeefachuu deemu, fedhuu fi haala akkamii keessatti WBOn araara kana irra qooda fudhachuu akka qabu utuu hin mijjeessin guyyaa 20 keessatti haa galu jechuun koreen kun dhiiba mootummaa jala waan jirtu fakkeessa. Guyyaan 20 nama daldala baheef iyyuu baayyee gababaa waan taheef itti yaadamee yaroo dheeran kennamuuf qaba.
Karaa biraa warri seera mootummaa kabachiisuuf weedisaa jiru ofii itti haa rakkitu malee WBOn seera mootummaa dhabaan Uummata Oromoo ajjeessaa fi saamaa jiru diiguuf malee tiksuuf dirqama hin qabu. Seerri mootummaa kun yaroo itti haqa Uummata Oromoo eegee fi eegsise hin jiru. Uummatni Oromoo yaroo miliyoonaan buqa’u, yaroo kumaatamaan ajjeessamuu, qabeenyi isaa saamamuu fi mirgi isaa sarbamuu wajjin hin dhaabbane. Uummanti Oromoo seera mootummaa kanaa sodaaf yoo tahe maal waan kabajuuf sababni tokko illee hin jiru.
Yaroo amma kanatti Impaayeera Itoopiyaa keessatti maqaa liyyuu Haayiliin kan Afaar, kan Somalee, kan Gumuz TPLF leenjistee hidhachiifte akka Uummata Oromoo irratti bobbaasaa jirtu namni hin agarre jiraa laata? Mootummaan naanno Amhaaraa Uummatni Amaaraa hidhachuu malee hiikachu akka hin qabne ifatti dubbatee jira. Uummatni Tigrayi hiriira nagaa bahuufuu qawween toora galee deema. Haala akkasi yaaddessaa tahe keessatti maaliif ilmaan haqa saba isaaniif dhaabbatan irraa qawwee guuruun barbaachisaa tahe? Waan har’a deemaa jiru kan irratti yoo dhugaa dubbachuu fi dhugaan hojjechuu dagannee maqaa Abbootii Gadaa fi haadha Siiqqeen seenaa Uummata Oromoo xurreessinee darbuuf teenya.
Alemuu Simee waan gaafa 1/22/19 Abbootii Gadaa Haadha Siiqee dura itti walii galee deeme gaafaa 1/23/19 waliigaltee tahe irratti komee dhiyeefachaa ture. Araara 1/24/19 Amboo tahaa ture irratti waan argame natti hin fakkaatu. Dura taa’aa ODP, Dr. Abiyi fi Itti Anaan ODP Dr. Lammaan maaliif wal gahii wali galitee kana irratti argamuu akka lagatan baayyee na yaaddeessaa. Waa’e araaraa kanaaf waan bakka guudaa laatan hin faakkatu ykn immoo kakuu Abbootii Gadaa fi Haadha Siiqqee fudhachuu dhiisuun yaada isaa gara barbaadanitti akka dabsatan waan isaan gargaaruuf tahuunis ni mala. Karaa biraas aangoo waan qabaniif WBOn yoo tole jedhee harka laachuu dide humnaan cabsuuf akka danda’an waan abdatanii tahuun ni mala. Walii gala akkeekni isaanii WBO dhabamsiisuu akka tahe waan wal nuu gaafachiisu hin qabu. Dhabamuu fi jiraachuu kan filatu WBO fi Uummata Oromoo bal’aa qofa.
← Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Dhihaa, Jaal Kumsaa Dirribaa (Jaal Marroo) SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Amajjii 25, 2019 →
One thought on “Yaadaa fi Yaaddoo Waa’ee WBO Ilaalu”
Dereje Gillo January 26, 2019
Qabsoon Bilisumma fi abbaa biyyumma kara nagaan ittii fufaa. Haala qabatamma biyyaa keesa jiru irratti hundahuun “stratagy and tactics ” bassuun biyyaa fi saba keesat wantaa ta’u malan Wal dura dubba kauhuun, wantaa dura ta’u malluu dura hojeechun barbachisadhaa.
Miseensotiin WBO biyyaa ittii galuun cassaa feedhii fi dandeetti isan itti galuun qabsoo itti fufuu qabbuu.
Karraa nagaan qabsoon itti fufaa. Saba ammaatee adeemu qabaa. Haala qabatamaa irra ittii hundahuu qabaa.